Ny fijoroana vavolombelona nataon’i Rova Sitraka - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Papa Fransoa sy ny tanora
Ny fijoroana vavolombelona nataon’i Rova Sitraka
Nangonin'i R.T.M il y a 2 années
Rova Sitraka Ranarison, tanora lahy 27 taona avy ao amin’ny disitrikan’Ambatolampy, diosezin’Antananarivo no nisolotena an’ireo tanora lahy nandritra ny fiaretan-tory teny Soamandrakizay ary nitondra ny tenin’ireo tanora nitafa mivantana tamin’ny Papa Fransoa ny 7 septambra 2019.
"Vao feno16 taona aho dia nanam-paniriana mafy ny hijery ny fiainan’ireo any am-ponja. Indray andro, nisy pretra iray nanentana ireo izay nahatsapa tena fa voaantso hikarakara ny voafonja. Nanomboka nirotsaka tamin’io asa io aho ka nanokana vola kely sy vary ho an’izany. Mbola nanentana indray ilay Pretra ka nangataka fiaraha-miasa taminay mba hitondra sakafo, fitafiana ary fanomezana avy amin’ireo olona malala-tànana ho an’ireo voafonja. Tsy nisalasala aho namaly ny fangatahany satria nifanaraka tamin’ny faniriako hatry ny ela izany.
Tonga àry ny fotoana nandehanana tany amin’ny fonja. Nifanojo tamin’ny fotoana fankalazana ny Alakamisy masina sy ny Zoma masina ary ny Sabotsy masina ny famangiana. Nanomboka nahatsapa àry aho tamin’io fa ireo izay any am-ponja tsy hoe olon-dratsy daholo, fa ao ireo izay voaheloka tsy ara-drariny, ary ao ireo nanao asa ratsy ka nanao izany noho antony manokana: satria tsy nanana n’inona n’inona hivelomana, na noho ny tsy fananana asa na koa notarihin’ireo namana ratsy.
Izay no nahatonga ahy hihevitra ho zava-dehibe ny firotsahana hanampy ireo voafonja, arak’izay azoko atao, amin’ny fananana fahavononana hiaraka aminy, hihaino ny olana iainany ary hitondra vahaolana raha azoko tanterahina. Ireo havako, ary anisan’izany ireo ray aman-dreniko dia nanome tsiny ahy noho ny zavatra nataoko. Saika laniko tamin’ny asa fanasoavana ireo voafonja izay vola rehetra azoko. Izany no nahatonga ireo havako rehetra handatsa ahy.
Indray andro, asa na fifanojoan-javatra fa nogadraina noho ny heloka tsy nataony ny iray amin’ireo havako. Nanatona ahy àry ny fianakaviako fa nila vonjy tamiko. Misaotra an’Andriamanitra amin’ny foko tontolo aho fa nanomboka tamin’io fotoana io dia hafa ny fijery sy ny fihetseham-pon’ireo havako ary tsapan’izy ireo fa hay olona toy ny olona rehetra ireo voafonja ary tsy hoe olon-dratsy mandrakariva izy ireny.
Ny traikefa niainako niaraka tamin’ireo voafonja dia nanosika ahy mba tsy hianona amin’ny fizaràna zavatra ho azy ireo fa hihevitra izay hanampiana azy ireo koa mba ahafahan’izy ireo miverina ao anatin’ny fiaraha-monina rehefa tafavoaka ny fonja izy ireo. Tiako ny milaza mazava fa ny asa ataoko any am-ponja dia tsy asa itadiavana tombon-tsoa. Asa maimaim-poana izany ary atao amim-pitiavana lehibe. Fa isaorako ireo pretra sy relijiozy izay nankahery ahy mandrakariva mba hanohy io traikefa miaraka amin’ny voafonja io.
Ray Masina, mba ampio ary herezo izahay mba ho tia mandrakariva ireo izay tena osa sy ireo ailiky ny fiaraha-monina.
Misaotra anao nihaino ahy."
Ireo lahateny efa navoaka teto
4- Fiarahabana nataon’i « Mère Madeleine de l’Annonciation » ny Papa François https://www.lakroa.mg/item-1891_articles_dossier_18-fiarahabana-nataonai-a-mare-madeleine-de-laannonciation-a-ny-papa-franaois.html
5- Lahateny nataon’i Fulgence Razakarivony, M.S, fiarahabana ny Papa Fransoa https://www.lakroa.mg/item-1907_articles_dossier_18-lahateny-nataonai-fulgence-razakarivony-ms-fiarahabana-ny-papa-fransoa.html
Kmf/Cnoe sy ny Covishield : Manaitra ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny malagasy hihetsika - il y a 5 heures
20 Juin JMR : Généralités sur les réfugiés politiques d’ailleurs et d’ici - il y a 6 heures
Hafatry ny Ray Masina ho an’ny Karemy 2021 : “Indro miakatra ho any Jerosalema isika…” (Mt 20,18) - il y a 4 mois
Migration climatique : Les Sakalava et Antandroy au bord d’un rude conflit communautaire à Tsaramandroso - il y a 5 mois